Home » Na-agbasa News Travel » Iche echiche n’uwa niile: Victoria Cliff Resort na Mergui Archipelago, Oke Osimiri Andaman
Ọ bụ njem eve na anyị na-aga
み ん な か ら の 匿名 質問 を 募集 中! こ ん な 質問 に 答 え て る よ ● Mr.Tom irughari は 偉 ... ● さ い き ん み た 映 画 は? ... ● 1 日 に 何 回 洗顔 し て る? ... ● ビ
Oxford Capital Group, LLC kwupụtara nkwekọrịta nkwekọrịta ogologo oge na njikwa maka Porter Hotel Portland na German Union Union Investment
Crugbọ mmiri ụgbọ mmiri mbụ kemgbe Covid setịpụrụ ịga Scotland #stgaguides
Crugbọ Mmiri Celebrity Alaghachikwute “Nnukwu Ugwu”
Princess Cruises And Holland America Line Kick Off laghachi ọrụ na US site na ọdụ ụgbọ mmiri Seattle
DACIA DUSTER 1.2 TCe 125pk ugwu airco / cruise / navi / PDC / trekhaak site na @Autosof
Egwuregwu Seychelles na-egbuke egbuke iji dọta ndị ọbịa si Romania - maka ịhapụ ya ozugbo
Aeroflot na-ebuputa ụgbọ elu mba ofesi site na ọdụ ụgbọ ala kachasị ọhụrụ C na Sheremetyevo International Airport
Maka ndị ọlụlụ ebulu niile, gbalịa imebi mgbidi na 6p
Iche echiche n’uwa niile: Victoria Cliff Resort na Mergui Archipelago, Oke Osimiri Andaman
Ebe nchekwa 1
dere Keith Lyons
Victoria Cliff Resort, ebe ohuru ohuru na ebe a na-egwu mmiri na Mergui Archipelago 'na-eche echiche zuru ụwa ọnụ, na-eme n'ime obodo' iji kwado njem nlegharị anya na Myanmar, dị ka Keith Lyons chọpụtara.
Otu n'ime ebe ezumike na ebe ezumike mmiri na Mergui Archipelago bụ ihe ịma aka nke ịbịpụta ahụmịhe Instagramable ma meziwanye nchebe gburugburu ebe obibi na agwaetiti dịpụrụ adịpụ na Oke Osimiri Andaman. Victoria Cliff Resort na agwaetiti Nyaung Oo Phee, nke dị n'ụsọ oké osimiri nke ndịda Mianmaa na Thailand, ga-emepe emepe n'ọnwa na-abịa site na Mịnịsta nke njem nlegharị anya nke Myanmar, mana ebe ezumike zuru oke nke osimiri were ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara afọ iri iji nweta mkpụrụ.
Ihe niile esiri ike karịa ka a tụrụ anya ya, ego akwụgoro karịa nke dị n'elu mmiri, ka Victoria Cliff CEO Alfred Sui kwuru, bụ onye nwetara mgbazinye maka agwaetiti ahụ na 2013. O were afọ abụọ iji nweta nnabata maka ụlọ ntu na ụlọ ezumike si ndị ọchịchị Myanmar. Gwọ kwa ọnwa maka ịntanetị satellite maka agwaetiti dịpụrụ adịpụ iji nye ndị ọrụ na ndị ọbịa wifi bụ US $ 2,600. “Anyi aghaghi ime ihe niile n’onwe anyị, gụnyere inweta mmiri ọ drinkụ drinkụ site n’isi mmiri, na iji ọkụ eletrik arụ ọrụ na ọkụ eletrik nke anyị. N'ịbụ onye mbụ n'ime agwaetiti, na ibute ụzọ, ọ dịrịghị anyị mfe, mana anyị emeela ka ọ dịrị ndị ọzọ mfe ịgbaso. ”
Agwaetiti a kpuchie oke ohia, nke a na-akpọbu McKenzie Island site na Burma colonial, dị na mpụga mpụga nke agwaetiti 800 nke mejupụtara Mergui Archipelago, mpaghara nke na-apụkwaghị ókè gafee mmadụ ọkara ikpeazụ gara aga. Ọ bụ na ngwụcha 1990 ka enyere ohere ka ụgbọ mmiri ole na ole si mba ofesi banye na mpaghara nke nwere ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ntinye akara nke agwaetiti ole na ole maka mmepe malitere naanị afọ iri a, ebe mbụ agwaetiti a, Myanmar Andaman Resort, anaghịzi anabata ndị ọbịa, ebe ọ gbanwere ndị ọbịa ụbọchị-na-abanye n'ụgbọ mmiri buru ibu nke ndị njem njem 1500 site na Singapore, Malaysia na Thailand. Ezigbo ebe obibi ezumike mbụ, Boulder Island Eco-Resort, bụ nke atọ ya, ebe ọnwa ole na ole gara aga bụ ebe ezumike ọhụrụ dị elu Wa Ale Resort na Awei Pila anabatara ndị ọbịa mbụ ha.
Site na aja coral dị nro dị nro, mmiri azure ọkụ na-ekpo ọkụ, na azụ nwere oke mmiri na-ekpo ọkụ gụnyere 'Nemo' clownfish, Nyaung Oo Phee nke oke ọhịa jupụtara na mbụ, nke nwere ike ịdị ka agwaetiti paradaịs, mana ịchọta nguzozi n'etiti ndị njem choro, ochichi govamenti-red teepu, ulo oru oku na ichebe gburugburu ebe obibi adighi nfe. Sui na-ekwu na enyere ya ọzọ ka ọ bụrụ agwaetiti ọzọ nwere njikọ dị mma na ndị na-eme mkpebi, ihe a na-ahụkarị n'oge iri afọ nke ọchịchị ndị agha Myanmar ebe a na-eme 'isi ike okpuru ọchịchị' n'enweghị nghọta ọ bụla. Site na ntuli aka ọchịchị onye kwuo uche na Myanmar na 2015, amaghị nke ọma banyere ọrụ na ibu ọrụ nke gọọmentị mpaghara na etiti egbochila usoro ahụ.
N'agbanyeghị ihe isi ike ndị ahụ, Sui nọgidesiri ike, site na ọchịchọ ya ịmepụta ụlọ ọrụ njem njem na-aga n'ihu na mpaghara nke ahụhụ site na nrụpụta ọrụ na-erigbu ndị na-erigbu ndị ahịa, ịzụ ahịa ahịa ojii na ọpụpụ nke ndị ọrụ si mba ọzọ na-achọ ndụ ka mma na Thailand dị nso. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ gọọmentị na isi obodo Naypyidaw amaghị onye ọ bụ ma lere ya anya na enyo, Sui na-ekwu na nyocha saịtị nke ụlọ ọrụ ya agbanweela uche nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị ọrụ obodo.
Fishinglọ ọrụ ịkụ azụ mpaghara, otu n'ime ndị were mmadụ n'ọrụ na mpaghara ahụ, mana ikpe mara maka ịchụ nta iwu na iwu akwadoghị maka ịkụ azụ, bukwara elebe ntọala ebe obibi mmiri na ọrụ mmiri maka ndị njem nleta. “Anyị na ndị ọkụ azụ̀ asọmpi, anyị nwere mmekọrịta mmekọrịta. Ọ bụ banyere iwulite mmekọrịta na kwa agụmakwụkwọ na ihe ọmụma. ”
Sui kwuru na mgbe mbụ ọ bịara n'agwaetiti ahụ, enwere ihe akaebe nke iji dynamite mee ihe n'ịkụ azụ, na nnukwu oghere na coral reef. Ọ dị mma ka ndị agha mmiri na-agagharị agagharị na Myanmar pụtara ike iji gbuo ma jide ndụ mmiri, mana ọ na-ekwu na ebe a na-agba mbọ ịkụziri ndị ọkụ azụ mpaghara ka ha ghara ịba azụ buru ibu ka ha wee nwee ike ịchekwa azụ, ma ghara imebi ya. kọral. Ebe ezumike ahụ arụgoro ụgbọ mmiri ka ụgbọ mmiri ghara ịdọrọ arịlịka ha na coral, ma ekweghị ka ndị ọkụ azụ gbute azụ na saịtị ebe a na-egwu mmiri. “Anyị na-arịọ maka ọdịnihu ha, maka ihe ha gafere n'ọgbọ dị n'ihu. Maka na a ghachaa azu nke oke osimiri, oburu na egbutu osisi, odighi ihu ozo. Ha niile ga-apụ. ”
O kwenyere na ọnụnọ nke ebe a enyerela aka ichebe akụ azụ gburugburu agwaetiti ahụ, ebe a na-eme njem ahụ eguzobela mmiri mmiri ọhụụ iji weghachi ebe ndị ọgbụgba ọkụ mebiri. Tupu ebe ezumike a akpọrọ ndị ọbịa mbụ ya, ehichapụrụ unyi dị iche iche dị ọcha, plastik si n'akụkụ South East Asia niile, tụfuo ụgbụ mmiri mmụọ. A na-ekpocha Oké Osimiri Ugwu na Nyaung Oo Phee ugboro atọ n'ụbọchị, na-ewepụ ihe mkpofu niile na ala maka imegharị na nhazi.
Ọ bụ ezie na ndị njem nleta Asia ugbu a, ọkachasị ndị Thailand na-ekpori ndụ na Mianmaa n'efu, mejupụtara 80% nke ndị na-eme njem ụbọchị ma ọ bụ ndị na-elekọta abalị na Nyaung Oo Phee n'oge ọnwa Ọktọba ruo Mee, Sui nwere olile anya na ọtụtụ ndị Western ga-achọpụta agwaetiti ahụ. Ndị Europe maara banyere gburugburu ebe obibi, ọ na-ekwu, dị ka ịkpachara anya ka ọ ghara imebi ma ọ bụ cheta coral, ma na-ahọrọ karama mmiri na-agbapụta na karama plastik na-eji otu.
Ọ bụ ezie na ebe ezumike dị na Nyaung Oo Phee yana ụlọikwuu ya nke oke ọhịa na obodo ndị nwere oke osimiri na-enye ndị ọbịa ohere ụkwụ efu iji banye n'ụsọ osimiri nwere agwa ọcha, ọ bụ naanị mita ole na ole n'ọdụ ụgbọ mmiri na obere ụgbọ mmiri gaa ezigbo akụ nke agwaetiti, ụwa dị n'okpuru. Nnyocha 2018 nke Fauna & Flora International mere atụmatụ na ụdị 300 nke coral dị na gburugburu agwaetiti, nke gbasaa 400km site na ugwu ruo na ndịda, ma eleghị anya ihe karịrị ụdị azụ azụ 600 dị ndụ na ahịhịa na agwa. Ndị otu, snappers, ndị eze ukwu, azụ urukurubụba, na icheoku bụ ndị a na-ahụkarị na Nyuang Oo Phee, yana ụdị 'Nemo' dị iche iche, na ndị snorkelers na ndị dịgasị iche iche nwere ike ịtụnanya na tebụl, ọkpọkọ, ụbọ akwara, staghorn, tigerclaw na Gorgonian seafan coral.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 300 na-arụ ọrụ n'àgwàetiti ahụ na na Victoria Cliff Hotel dị na Kawthaung, Sui na-atụkwa anya na na mba ndị ọzọ, ọtụtụ njem nlegharị anya nke obodo, ihe nkiri na ihe omume ga-enye ndị ọbịa ọtụtụ ihe mere ha ga-eji nọrọ n'akụkụ Myanmar nke oke, kama karịa ịbịa njem njem otu ụbọchị site na ọdụ ụgbọ mmiri Thai nke Ranong, gafere oke osimiri ahụ. “Agwaetiti ndị a na-enye mma mara mma nke anaghị ahụ n’ebe ọ bụla ọzọ n’Eshia, yana ha enweghị igwe mmadụ ma buru oke ibu. Ọ bụla mmepe kwesịrị ịchịkwa, ka ọ ndammana. ”